ကျောင်းသားသစ်မျက်နှာဖုံး» Hodges တက္ကသိုလ်
Hodges တက္ကသိုလ်၏ကျောင်းသားသစ် Orientation (NSO) သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Hodges 'Hawks ကိုသင်၏ပညာရေးအတွေ့အကြုံအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်ကူညီသည်။
အောက်ဖော်ပြပါခလုတ်များသည်လုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုလမ်းပြပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တက္ကသိုလ်နှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်။ ယခုစတင်ရန်နှင့်သင်လိုအပ်သည့်အချိန်မရွေးပြန်လည်လည်ပတ်ပါ။
သမ္မတဒေါက်တာ Meyer မှသ ၀ ဏ်လွှာ
ပုဂ္ဂလိကအကျိုးအမြတ်မယူသည့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Hodges တက္ကသိုလ်သည်ကျောင်းသားများအား၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊
Florida အနောက်တောင်ပိုင်းရှိထူးခြားသည့်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Hodges သည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပါကနှိပ်ပါ ဒီမှာ.
ဝိန်း Fort Myers ကျောင်းပရဝုဏ်အဆောက်အ ဦး U နှင့် H
Fort Myers ကျောင်းပရဝုဏ်အဆောက်အ ဦး U
ကျောင်းသား ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်နှင့် ၀ င်ခွင့်များ
ကျောင်းသားသမဂ္ဂကျန်းမာရေးသိပ္ပံအဆောက်အ ဦး - ဦး
HU ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ပါ။
HU Self-Service သည်လာမည့် ၂၄/၇ ရက်၊ ၁၀၀% online တွင်လာမည့်သင်တန်းတွင်မည်သည့်သင်တန်းကိုမဆိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်တောင်းဆိုရန်ခွင့်ပြုသည် -
အတွက် Log myHUgo
HU ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုအပိုင်းအောက်ရှိ Registration and Degree Planning ကိုနှိပ်ပါ
သင်၏သင်တန်းအချိန်ဇယားကိုအတည်ပြုရန် Plan နှင့် Schedule ကိုနှိပ်ပါ
MyHUgo & HU ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှု
MyHUgo သည် Hodges တက္ကသိုလ်၏အွန်လိုင်းကျောင်းသား ၀ န်ဆောင်မှုပေါ်တယ်၊ ကျောင်းသားများအားလုံး HU Self-service ကိုလျင်မြန်စွာရယူနိုင်သည်။ myHUgo ဖြင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်ပြီးသင်၏တက္ကသိုလ်စီးပွားရေးကိုအွန်လိုင်းတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
MyHUgo ပေါ်တယ်သင်ဝင်ရောက်သည့်အခါသင်၏ပင်မစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏အီးမေးလ်လင့်ခ်တစ်ခုပေါ်လာမည်။ Hodges သည်သင်၏ကျောင်းသားအီးမေးလ်အကောင့်ကိုသင်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်တရားဝင်နည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုလိမ့်မည်.
Canvas သည် Hodges တက္ကသိုလ်၏အွန်လိုင်းသင်ကြားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြစ်ပြီးသင်တန်းပို့ချသူများနှင့်ကျောင်းသားများသည်သင်တန်းစာရွက်စာတမ်းများကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ တာ ၀ န်များတင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းတွင်ပူးပေါင်းခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Hodges University တွင်ကျောင်းသားများတွင်သူတို့ရှိကောင်းရှိနိုင်သောနည်းပညာဆိုင်ရာပြသနာများကိုကူညီရန်ရည်ရွယ်သည့် IT အဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။ ကျောင်းသားများသည်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအတွက်တောင်းဆိုမှုကို တင်၍ ခြေရာခံနိုင်ပြီးကိုယ်တိုင်အကူအညီကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းနှင့်မည်သို့သတင်းအချက်အလက်များရှာဖွေနိုင်သည်။ ဝင်ရောက်ရန်ကျောင်းသားများသည်သူတို့၏ Hodges အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စကားဝှက်ကိုသုံးမည်။
အိုင်တီ Help Desk ပံ့ပိုးမှု
သင်မှအရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်နေရာချထားရန်အတွက်စာကြည့်တိုက်များဤတွင်ရှိနေသည်။ စာကြည့်တိုက်ဒေတာဘေ့စ်ကိုရှာဖွေရန်သို့မဟုတ် APA လက်စွဲလမ်းညွှန်ကိုသင်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်ဖြစ်စေစာကြည့်တိုက် ၀ န်ထမ်းများကိုလူကိုယ်တိုင်ဖုန်း၊ အီးမေးလ်ဖြင့်ရနိုင်သည်။
ကျောင်းသားလက်စွဲစာအုပ်သည်သင်စတင်သည်နှင့် Hodges တက္ကသိုလ်နှင့်သင်၏ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို ဆက်လက်၍ လမ်းညွှန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။
တက္ကသိုလ်ကတ်တလောက်သည် Hodges တက္ကသိုလ်၏ပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပညာရေးမူဝါဒများအတွက်လမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားအရင်းအမြစ်များစာမျက်နှာကိုသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ၊ ဆရာများ၏ရုံးချိန်၊ စာပေများနှင့်အခြားတက္ကသိုလ်ဌာနများအတွက်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုသင်တွေ့ရှိရမည့်ကျောင်းသားအားလုံးရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျောင်းသားများသည် MyHUgo သို့ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်ဤစာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်နိုင်သည်။
ဘဏ္aidာရေးအထောက်အပံ့အစီအစဉ်တွင်ထောက်ပံ့ငွေများ၊ ချေးငွေများနှင့် / သို့မဟုတ်အလုပ် - လေ့လာမှုအတွက်ရန်ပုံငွေများပေါင်းစပ်ထားနိုင်သည်။ ဤဆုများသည်ရရှိသောရန်ပုံငွေပမာဏနှင့်ဖက်ဒရယ်ကျောင်းသားကူညီမှု (FAFSA) မှဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်းသင်၏အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုပေါ်မူတည်သည်။
ကျူရှင် & အခကြေးငွေ
ကျောင်းသား Accounts ကို
ကျောင်းသားများ၏ငွေစာရင်းအဖွဲ့သည်ငွေတောင်းခံရန်၊ ကျူရှင်နှင့် ၀ န်ဆောင်ခများကိုနားလည်ရန်၊ ငွေပေးချေရန်အစီအစဉ်များနှင့်အခြားအရာများကိုကူညီနိုင်သည်။
ငွေပေးချေမှုရမည့် Options ကို
Hodges University မှသင်ကြားခနှင့်အခကြေးငွေများကိုလစဉ်အရစ်ကျပေးဆောင်ရန်အတွက်ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျောင်းသားများသည် MyHUgo သို့ ဝင်ရောက်၍ သွားနိုင်သည် ကျောင်းသားအကောင့်အချက်အလက်.
သင်၏ပြန်အမ်းငွေများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာရရှိနိုင်ရန် Hodges University သည် BankMobile နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
Academic Advising ကို 800-466-0019 တွင်ခေါ်ဆိုပါ
Hodges University သည်မသန်စွမ်းကျောင်းသားများအားပညာရေးကိုတန်းတူညီမျှရရှိပိုင်ခွင့်ကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံသည်။
Hodges University သည်ကျောင်းသားများအားအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ ဘက်လိုက်ခြင်း၊ မလိုမုန်းထားခြင်းသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများမှကင်းဝေးသည့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အတူတကွသင်ယူနိုင်မည့်သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်သန္နိis္ဌာန်ချထားသည်။
privacy အခွင့်အရေး (FERPA)
FERPA လမ်းညွှန်ချက်များအရကျောင်းသားများသည် (၁) သူတို့၏ကျောင်းသားမှတ်တမ်းကိုစစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (၂) မှတ်တမ်းများကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ (၃) ထုတ်ဖော်ရန်သဘောတူခြင်းနှင့် (၄) တိုင်ကြားခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကျောင်းဖွင့်သည့်အချိန်မတိုင်မီတွင် Hodges တက္ကသိုလ်ရုံးခွဲလုံခြုံမှုရုံးသည်ကျောင်းသားများ၏လုံခြုံမှုကို ဦး စားပေးသည်။
ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ သင်ကျောင်းသားသစ်ကို ဦး တည်ပြီးပါပြီ
ကျောင်းသားများအားလုံးရရှိနိုင်သောကျောင်းသားများအတွက်ပံ့ပိုးမှုဌာနနှင့် Hodges တက္ကသိုလ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်အချိန်ယူခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်၊ Hodges ၌သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်သင့်အနေဖြင့်ဤ site ကိုရယူနိုင်လိမ့်မည်။ မင်းကမင်းဘွဲ့ရဖို့အလှည့်ရောက်ရင်စင်မြင့်ကိုလျှောက်သွားတာကိုမစောင့်နိုင်ဘူး။
သငျသညျယခု Hawk ရဟတ်ယာဉ်ပါပဲ။ ကြည့်လိုက်ပါ ဦး
ကျွန်ုပ်တို့၏ Hawks စတိုးတွင်အွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ကျောင်းဂုဏ်ယူမှုကိုပြနိုင်သည်။ သင်သုံးနိုင်သောပစ္စည်းများကို USB drives နှင့် tumblers မှအဝတ်အထည်အထိနှင့် Hodges Hawk တို့တွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုးကဘာနဲ့မတူတာလဲ။ ၀ ယ်ယူမှုတိုင်းအတွက်ရရှိသောအကျိုးအမြတ်အချို့ကို Hawks Scholarship Fund သို့သွားသည်။